KRISTIANSAND: Ninkii norwijiga ahaa ee dilay Jacquub Xasan iyo Tone Ilebekk oo meydkiisa laga helay xabsiga dhexdiisa : Calanka.com
KRISTIANSAND: Ninkii norwijiga ahaa ee dilay Jacquub Xasan iyo Tone Ilebekk oo meydkiisa laga helay xabsiga dhexdiisa
in Dibedda, Norway
Wararka ka imaanaya magaalada Mandal ee dalka Norway ayaa waxaa ay sheegayaan in xabsi ku yaal magaaladaasi laga dhex helay meydka nin norwiji ah kaas oo toorey ku dulay wiil yar oo soomaaliyeed iyo hooyo norwiji ah, 5-tii bisha Desember ee sanadkii 2016-ka.
Madaxa xabsiga Mandal Frank Tveiten Johansen ayaa warbaahinta u sheegay in ninkan meydkiisa la helay xilli la doonayay in hawo lasoo siiyo.
Jakob Hassan iyo Tone Ilebekk ayaa kala jiray markii la dilayay da`da 48 iyo 14 sano, waxaana dambiilaha dilka geystay uu isna jiray xilligaas 16 sano.
Ninkan ayaa markii la xukumay la geeyay xabsiga dambiilayaasha dad`da yar la geeyo ee ku yaal caasimadda labaad ee dalkaasi ee Bergen, waxaana laga wareejiyay markii uu qaan-gaaray sannad ka dib.
Jacquub ayaa la sheegay in uu geliyay mindida 28 jeer, halka hooyada norwijiga ah ee kala dhexgali rabtay uu galiya 32 jeer.
Dhacdadan ayaa 5-tii bisha Desember ee sanadkii 2016 ka dhacday dhabarka dambe ee Wilds Minne skole ee magaalada Kristiansand, dambiilaha ayaana falka ka dib ka baxsaday goobta.
Yacquub Xasan, 14-jir
Mar uu maxkamadda ka hadlayay xilligii la xukumayay 2017-dii ayaa waxaa uu ka qoomameeyay dambiilaha dilka uu u geystay labada ruux kaas oo uu sheegay in uu saameyn ku reebay nolashiisa, waxaana uu intaa raaciyay in uu ka fekerayo, murugadana la qeybsanayo qaraabada ay ka tageen.
Maxkamadda ayaa u cuskatay wiilkan shaciga ka yaal dilka ay geystaan shakhsiyaadka ka yar da`da 16 sano, sidaas darteedka loogu xukumay 11 sano oo keliya oo ah kala bar inta lagu xukumo dadka waaweyn ee dilalka geyta.
Waxaa sidoo kale lagu xukumay in uu siiyo ehelka labada ruux ee uu dilay magdhow lacageed oo marka la isu geeyo gaareysa 1,5 million kroner.
Xukunka ugu dheer ee qof wax dilay oo qaan-gaar ah lagu xukumo dalka Norway ayaa ah 21-sano oo xarig ah.